လှအောင် “ဟာ ငါမင်းကို တွေ့ချင်နေတာကွာ… မေးစရာလည်း ရှိနေလို့.. ငါသိချင်တာလည်း ဖြစ်နေလို့ မင်းကို ငါ အရမ်းမျှော်နေတာ…”
မြဆောင် “ သူငယ်ချင်းရ မင်းက ဘာမေးချင်လို့တုန်း….ဘာသိချင်လို့တုန်း”
လှအောင် “ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူးကွာ… အခု လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက .. ပြည်သူတွေ အသုံးပြုဖို့ဆိုပြီး ထုတ်ပေးနေတဲ့… လျှပ်စစ်မီတာ ၄ မျိုးအကြောင်းပါ.. အဲဒါလေးကို ငါ သိပ်မရှင်းလို့..”
လှအောင် “အခုမီတာ ၄ မျိုးဆိုတာကွာ အရင်တုန်းက မီတာတွေနဲ့ မတူလို့လား သိချင်တာ..”
မြဆောင် “မတူဘူးကွ… လုံးဝကို မတူတော့တာ… အရင်တုန်းက .. အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မီတာတွေက လျှပ်စစ်သံလိုက်နည်းနဲ့.. မီတာကို လည်စေတဲ့ Analogue မီတာနဲ့ Digital မီတာတွေက Error code မပါဘူး..အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Error code တွေပါတဲ့ Digital Meter တွေကို အသုံးပြုလာတာ…အဲ့လိုDigital Meter တွေကို အသုံးပြုလာတဲ့အတွက် မီတာဖတ်ရာမှာ ပိုမိုတိကျတယ်၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု တွေလည်း လျော့နည်းစေခဲ့ပြီး မီတာဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာလည်း ဝန်ထမ်းအင်အား နည်းနည်းနဲ့ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် မျက်ကွယ်ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်တယ်။ အခု မီတာ ၄ မျိုးဆိုတာကလည်း အိမ်သုံးမီတာ ၃ မျိုးနဲ့ ပါဝါမီတာကို ခေါ်တာဖြစ်ပြီး အိမ်သုံးမီတာ ၃မျိုးကို လည်း Type I , Type II , Type III ဆိုပြီး ၃ မျိုး ၃ စား သတ်မှတ်ထားပြီး မီးသုံးစွဲသူ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်သုံးစွဲချင်တဲ့ မီတာကို ရွေးချယ်လျှောက်ထား တပ်ဆင်နိုင်တယ်ကွ… အဓိက ကတော့ ပြည်သူတွေ စျေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့မီတာကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အစိုးရက စေတနာထား ဆောင်ရွက်ပေးထားတာပဲကွ…”
လှအောင် “အေးပါကွာ…မီတာ ၄မျိုးအကြောင်းတော့ ငါ ရှင်းသွားပါပြီ… ဒါပေမယ့် အခု… မီးသုံးစွဲ သူတွေကြားမှာ… ကြားနေရတာကတော့… အခု Digital Meter တွေက error တွေဖြစ်တာ များတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ Error4က အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ် ငါလည်း Error ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိလို့ ငါ့ကိုနားလည်အောင် ရှင်းပြပါဦး…”
မြဆောင် “ သူငယ်ချင်းရာ…အခု သုံးစွဲနေတဲ့ Digital Meter တွေမှာ error ဖြစ်တာများတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ… အရင်တုန်းက Analogue Meter တွေက အပြစ်တွေဖြစ်နေလည်း ဘာမှမသိဘူး… အခုက Error code ပါတဲ့ Digital Meter တွေဆိုတော့ ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာတဲ့အတွက် အပြစ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်း မီတာမှာ Alarm မီးတွေပြတော့ အပြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပိုပြီးသိရတဲ့သဘောပါကွာ…ဒါတွေက အရင်ကလည်း ဖြစ်နေပြီး အခုလည်း ဖြစ်နေဆဲပါ… မင်းကို နားလည်အောင် ပြောရရင်… အခု Digital Meter မှာ Error (၉)မျိုး ရှိတယ်။ အခု4Meter System ဖြစ်တဲ့ Digital မီတာတွေမှာ Error တွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မီတာ မကောင်းတော့ဘဲ ပျက်သွားလို့ ကြောင်သွားလို့ ဖြစ်နေတာတွေမဟုတ်ဘူးကွ.. အခုလို နည်းပညာ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ငါတို့ရဲ့မီတာတွေကိုလည်း ခေတ်နဲ့အညီ နည်းပညာတွေ သုံးထားလို့ပေါ့ကွ.. မင်းရှင်းအောင် ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် မီတာကို တပ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ အဝင်အထွက်ကြိုးတွေကို မီတာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ကြိုးအဝင်အထွက် ပုံစံအတိုင်း မတပ်တာတို့၊ မသမာတဲ့ နည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ မီတာယူနစ်မတက်အောင် ဒါမှမဟုတ် အတက်နှေးအောင် ဓာတ်အားခိုးယူသုံးစွဲ တာတွေတို့၊ မသမာမှု မရိုးသားမှုကြောင့် မဟုတ်ပေမယ့်လည်း စျေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်း နိမ့်ကျပြီး စျေးပေါတဲ့ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို တပ်ဆင်အသုံးပြုမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီကိစ္စ တွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို မီတာက သိရှိမှတ်သားထားပြီး သူသိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို Error အမှတ်အသား နံပါတ် (၁)ကနေ (၉)အထိကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးအစား အလိုက် မီတာရဲ့ Display မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ မီးသုံးစွဲသူအနေနဲ့ကော မီတာလာဖတ်တဲ့ ဌာနက မီတာဖတ် စာရေးတွေ သိသာမြင်သာအောင် အချက်ပြ အသိပေးတဲ့ သဘောပေါ့ကွာ…. ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ အချက်က လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ တွေကို ကြိုတင်သတိပေးနိုင်တဲ့ Error အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ Error နံပါတ် (၃) (၄) စတာတွေကို ခွဲခြားပြသပေးတဲ့ အချက်ပြမီးတွေပေါ့…
လှအောင် “အေး…ဒါဆို ငါ့ကို Error (၉)မျိုးအကြောင်း နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပါဦး”
မြဆောင် မင်းကမေးလာတော့ ငါကလည်းရှင်းပြချင်နေတာနဲ၌ အတော်ဘဲ “Error (1) က မီတာကို By pass ပြုလုပ်တာ၊ By pass ဆိုတာကလည်း မီတာ အဝင်ကြိုးနဲ့ မီတာ အထွက်ကြိုးကို အခြား ကြိုးတစ်စနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ပြီးတော့ မီတာယူနစ် အတက်နှေးအောင် ပြုလုပ်တာကို ခေါ်တာ…တစ်နည်းအားဖြင့်…မီးသုံးစွဲသူက ခိုးသုံးတာပေါ့ကွာ.. အဲဒီလို လုပ်ရင်… မီတာက Error (1) အချက်ပြမီးလင်းပြီး မီးခိုးသုံးတာကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးလို့ရတာပေါ့… ဒါပေမယ့် မောင် … မီတာယူနစ်ကတော့ သုံးသလောက်ကို တက်နေမှာ နှေးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး…ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အဲဒီ Error (1) ပေါ်ရင် ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်တယ်… Error (2) ကတော့ မီတာအဝင်မှာ Line နှင့် Neutral ကို ပြောင်းပြန်တပ်ပြီး သုံးတာကို ခေါ်တာ.. အဲဒီလို သုံးခဲ့ရင် Error (2) ရဲ့ အချက်ပြမီးက လင်းတယ်… Error (3) ကတော့ မီတာအဝင် Neutral ကြိုး တပ်ထားသော်လည်း မီတာအထွက်တွင် Neutral ကြိုးကိုမသုံးဘဲ မြေဓာတ်ကျထားတဲ့ ကြိုးနဲ့ သုံးစွဲခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို သုံးထားရင် Error (3) အချက်ပြမီးက လင်းလာတော့ အလွယ်တကူ သိနိုင်တယ်… တစ်ခါတလေးလည်း အိမ်တွင်း ဝါယာကြိုးကို အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော ဝါယာကြိုးများ အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဝါယာကြိုးများ ပေါက်ပြဲခြင်း Body earth ကျနေခြင်း၊ ၄င်း Earth ကျနေသော Body နှင့် Neutral ကြိုး၏ ပေါက်ပြဲနေသော အစိတ်အပိုင်းထိနေခြင်းကြောင့် Error (3) လည်း ပြတတ်ပါတယ်… Error (4) ကတော့ မီတာအထွက်ဘက်ရှိ… ဝန်အားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မြေဓာတ်ချပြီး သုံးစွဲရင် အချက်ပြမီး လင်းတာကို ပြောတာ…. Error (5) ကတော့ မီတာရဲ့ Terminal cover (ကြိုးအဝင်အထွက်လုပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို အုပ်ထားတဲ့ ကာဗာအဖုံး) ကိုဖြုတ်ရင် Error (5) မီးလင်းတယ်… မီတာရဲ့ ကြိုးအဝင်အထွက်ကာဗာအဖုံးကို ကိုဖြုတ်တယ်ဆိုတာ လျှပ်စစ်ဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေတောင် မီတာစတပ်ပေးတဲ့ အချိန်မှာသာ ဖြုတ်ခွင့်တပ်ခွင့် ရှိတာ… မီးသုံးစွဲသူ အနေနဲ့ ဖြုတ်ခြင်းတပ်ခြင်း လုပ်ခွင့်မရှိဘူး… Error (6)ကတော့ မီတာအဝင်အထွက်ကြိုးတွေကို အဝင်ကို အထွက်၊ အထွက်ကို အဝင်လုပ်ပြီး ပြောင်းပြန် တပ်ဆင်ပြီး သုံးစွဲတာကို ပြောတာ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်ရှိတဲ့သူတွေ သတိထားရမယ့် အချက်ဖြစ်တယ်…Error (7) ကတော့ မီတာရဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဝန်အားထက် ပိုမိုကျော်လွန်ပြီး ရှိသမျှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို စုပြုံသုံးလို့ ဝန်အား ပိုဖြစ်နေတာကို အသိပေးအချက်ပြတဲ့အနေနဲ့ လုပ်ထားတာ.. အထူးသဖြင့် မီးအကြာကြီးပျက်ပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ထမင်းဟင်းချက်တာတွေ၊ ရေစက်မော်တာ မောင်းတာတွေ၊ မီးပူတိုက်တာတွေ၊ အဲယားကွန်းဖွင့်တာတွေကို စုပြုံလုပ်ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ Error အမျိုးအစားပေါ့.. Error (8) ကတော့ မီတာ အဝင်ဖက် Neutral ကို ဖြုတ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြတ်တာဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် တပ်ထားသယောင်လုပ်ထား တာဖြစ်ဖြစ် အဲလိုတွေထဲက တစ်ခုခုလုပ်ထားပြီး မီတာရဲ့အထွက်ဘက်က Line ကြိုးကိုတော့ အမှန်တကယ်ထွက်ထားပြီးတော့ Neutral ကြိုးကို ထွက်သယောင်နဲ့ Neutral ကြိုးအစား အပြင်မှာ မြေဓာတ်ချ သုံးထားတာ တစ်နည်းပြောရရင် မီတာဆီ ပါဝါမရောက်အောင်လုပ်ထားရင် ပေါ်တဲ့ Error အမျိုးအစားပေါ့ကွာ… Error (9) ကလည်း မြေဓာတ်ချလို့ပေါ်တဲ့ Error အမျိုးအစား နောက်ထပ် တစ်မျိုးပဲကွ… ဒီအမျိုးအစားကတော့ ပုံမှန်ဆိုရင် မီတာအဝင်ကို Line (Phase) တစ်ကြိုး၊ Neutral တစ်ကြိုး တပ်ရတာဖြစ်ပေမယ့် မီတာအဝင်ကြိုးပေါက် နှစ်ပေါက်လုံးမှာ Line (Phase) ကြိုးတပ်ထား ပြီးတော့ မီတာအထွက်ဘက်ကနေ ထွက်လာတဲ့ Line ကြိုးတစ်ချောင်းချင်းစီကို မြေဓာတ်ချထားတဲ့ ကြိုးနဲ့ပေါင်းပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မီတာက အချက်ပြမယ့် Error အမျိုးအစားပဲ…”
လှအောင် “မင်းပြောပြလို့ Digital Meter မှာ Error (၉) မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရပြီးတော့ error ဖြစ်ကြောင်းလည်း သက်ဆိုင်ရာ အချက်ပြမီးတွေလင်းတယ်လို့ သိရပြီ… အဲဒီလို error ဖြစ်ရင် ဘယ်လို အရေးယူခံရနိုင်လဲ သိချင်တယ်….”
မြဆောင် “ Error ဖြစ်တိုင်းလည်း မီးသုံးစွဲသူမှာ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး…အဲဒီလို Error ဖြစ်တာကို စစ်ဆေးလိုက်လို့ မီးသုံးစွဲသူက မရိုးမဖြောင့်သော နည်းနဲ့ မီတာယူနစ်မတက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ထားရင်တော့ တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံရနိုင်တယ်… Error (1) By Pass လုပ်တာတို့ Error (2) Line နဲ့ Neutral ပြောင်းပြန်တပ်တာတို့ Error (5) Terminal အဖုံးကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဖြုတ်ပြီး အဝင်အထွက်ကြိုးတွေ ပြုပြင်ထားတာတို့ Error (6) ရဲ့ အဝင်အထွက်ကြိုးတွေ ပြောင်းပြန် တပ်ပြီး မီတာယူနစ် ပုံမှန်အတိုင်းမတက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြုလုပ်ထားရင်တော့ လျှပ်စစ်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံရမှာပဲ…. တချို့ဟာတွေကျတော့ မီးသုံးစွဲသူက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်တာတွေလည်း ရှိတတ်တယ်…. အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ အရေးယူခံရခြင်းက ကင်းလွတ်ခွင့် ရနိုင်တယ်… ဥပမာကွာ.. မီတာကို အဝင်အထွက်ကြိုးတွေ တပ်ကတည်းက… မိမိရရ မတပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတလေလည်း တပ်ဆင်တဲ့သူရဲ့ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် Terminal cover မှာ ဖော်ပြထားသည့် Wiring Diagram အတိုင်း မတပ်ဆင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်…ဒါကို မီတာတပ်တဲ့လူကို အရေးယူရမှာ…”
လှအောင် “အေးပါကွာ…. မင်းရှင်းပြတော့လည်း… သဘောတော့ ပေါက်သလိုလို ရှိတယ်… ဒါပေမယ့် အခုတလော ငါကြားမိတာက … Error (4) ကြောင့် မီတာတွေမှာ Alarm တွေ ခဏခဏပြတယ်လို့ ကြားရပြီး မီတာတွေကိုလည်း ပြန်ပြန်လဲပေးနေရတယ်လို့ ကြားနေရတယ်… အဲဒါဘာဖြစ်လို့တုန်း..”
မြဆောင် “အေး…. အဲဒါကိုပဲ ငါရှင်းပြချင်တာ… Error (၉) မျိုးထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးက Error (4) အမျိုးအစားပဲ …ကျန်တဲ့ Error တွေက ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ တစ်ခုခုလုပ်မှ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပေမယ့် Error (4) ကတော့ မရိုးမဖြောင့်သော အကြံအစည်ဖြင့် သုံးစွဲခြင်း မဟုတ်ပေမယ့်လည်း… စနစ်မကျတဲ့ အိမ်တွင်း Wiring စနစ်ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပြီး ထပ်မံသွယ်တန်းအသုံးပြုထားတဲ့ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတစ်ခုခုက Body Earth ကျနေပြီး ပေါက်ပြဲနေသောNeutral ဝါယာကြိုးစနှင့် ထိနေတဲ့အခါမှာ မီတာမှာရှိတဲ့ ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်တဲ့စနစ်ကြောင့် Alarm မီးလင်းလာတယ်… ဒါတွေက ..အိမ်တွေမှာ ခဏခဏ ဖြစ်တတ်တာ… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့အိမ်တွေမှာ… Analogue ကနေ Digital Meter ကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင် အသုံးပြုပေမယ့်… အိမ်တွင်းဝါယာတွေက အရည်အသွေး အဆင့်မမီတော့ဘူး… အဲဒီတော့ အိမ်တွင်းဝါယာကြိုးတွေက ကာဗာတွေ ပေါက်ပြဲနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပန်ကာတို့ အဲယာကွန်းတို့ ရေခဲသေတ္တာတို့ ထမင်းပေါင်းအိုး မီးပူ အစရှိသဖြင့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ထပ်မံသွယ်တန်းသုံးစွဲတဲ့ ဝါယာကြိုးတွေ ပေါက်ပြဲနေရင် ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဥပမာ… ရေခဲသေတ္တာ Body Earth ကျနေရင်ဖြစ်ဖြစ်… Error (4) က အဖြစ်များတယ်… အဲဒီတော့ မီးသုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ အိမ်တွင်းဝါယာကြိုးနဲ့ အိမ်တွင်းအသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို Body Earth မကျအောင် ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ဒီ Error (4) ပြဿနာက ရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး” အခုအဖြစ်များနေတဲ့ Error (4) ဆိုရင် မီးသုံးစွဲသူအနေနဲ့ မရိုးမသားမှု၊ မသမာမှုကြောင့် လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် စျေးကွက်ထဲမှာ စျေးပေါပေါနဲ့ ဝယ်ယူရခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးနိမ့်ကျတဲ့ မီးကြိုးတွေ၊ မီးခလုတ်တွေ၊ Breaker တွေ၊ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူတပ်ဆင်မိတယ် ဆိုပေါတော့.. အဲဒီပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်မလိုက်အောင် ကာထားတဲ့ လျှပ်ကာပစ္စည်းတွေ ပေါက်ပြဲ စုတ်ပြတ်နေတာတို့ သတ်မှတ်အပူချိန်ကို မခံနိုင်တာတွေကြောင့် နေအိမ် အဆောက်အဦအတွင်းကို လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ ကူးလူးစီးဆင်းနေမှုတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့..အဲဒါကို လူတွေက မသိလိုက်မသိဘာသာနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိမိ၊ ကိုင်မိမယ်ဆိုရင် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ပြီး သေဆုံးနိုင်သလို နေအိမ်အဆောက်အဦတွေ ဝါယာရှော့(ခ်)ဖြစ်ပြီး မီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် Error (4) အမှတ်အသား ကိုယ့်အိမ်မှာ ပြနေမယ်ဆိုရင် အိမ်တွင်းဝါယာစနစ်ကို အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးပြုပြင်သင့်ကြသလို၊ အရည်အသွေး နိမ့်ကျနေတဲ့ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဆက်လက်အသုံးမပြုသင့်တောဘဲ ချက်ချင်းအစားထိုး အသုံးပြုသင့်ကြတာပေါ့ကွာ… တို့လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့က မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက် ဆိုသလို မိမိအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ အချိန်မရွေး အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေတာကို အသိပညာဗဟုသုတ မရှိတဲ့အတွက် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေထိုင်တတ်ကြတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကြောင့် မဆုံးရှုံးသင့်တဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနေကြတဲ့ အဖြစ်ဟာ အရမ်းရင်နာစရာကောင်းပါတယ်..
လှအောင် “အဲဒါဆိုရင်…. ငါတို့ မီးသုံးစွဲတဲ့အိမ်တွေက… ဝါယာကြိုးတွေ ကောင်းမကောင်း… Body earth ကျနေခြင်း ရှိမရှိ အမြဲတမ်း စစ်ဆေးနေဖို့ လိုတာပေါ့နော်…ပြီးတော့ အဲဒီလို Error (4) ဖြစ်ရင် မီတာ ယူနစ်တက်တာတွေဘာတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားသလား… ပိုတက်တတ်သလား… ဘယ်လိုဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ ငါကွဲကွဲပြားပြား သိချင်တယ်….”
မြဆောင် “အဲဒါတော့ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့…သူငယ်ချင်း… ဒီလို ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိဖို့… မီတာမှာ Error (4) ဆိုတာ မီးလင်းတာ… မီတာရဲ့ ယူနစ်သုံးစွဲမှုကို မထိခိုက်ဘူး… အဲဒီလို မသိလို့ ..ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စဆိုရင်လည်း… ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါတယ်… မရိုးမဖြောင့်သော သဘောနဲ့ မလုပ်ဘူးဆိုရင် … ဘာပြဿနာမှလည်း မရှိပါဘူးကွာ…”
လှအောင် “မင်းပြောပြတော့လည်း ရှင်းသွားတာပဲ… ငါလည်း အရင်တုန်းက… သို့လော..သို့လော ဖြစ်နေတာ… မင်းလို… ဂဃနဏ ရှင်းပြနိုင်မှပဲ အားလုံးနားလည်မှာ…. မီးသုံးစွဲသူတွေသိအောင် အခုမင်းရှင်းပြတဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်လိုက်တာကွာ…”
မြဆောင် “အမှန်တော့ …မီးသုံးစွဲသူ ပြည်သူတွေအားလုံးသိထားသင့်တာပဲ… အခုက အိမ်တွင်း ဝါယာတွေ ပေါက်ပြဲနေရင်… အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်တွေမှာ Body earth ကျနေရင် မီတာမှာ Error (4) ပေါ်တာလောက်ကိုပဲ သူတို့တွေက သတိထားမိနေတာ… အမှန်ဆို သိထားရမှာက မီတာမှာ Error (4) ပေါ်လာရင် သူတို့အိမ်က တနေရာရာမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ စီးဝင်စီးဆင်းနေတယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်တာ… အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ အိမ်က အချိန်မရွေး ဓာတ်လိုက်မှု အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ် ကိုတောင် ထိခိုက်နိုင်သလို ဝါယာရှော့(ခ်)ဖြစ်ပြီး အိမ်မီးလောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်တာ…. ရှင်းရှင်းပြော ရရင်တော့ကွာ… အိမ်တွင်း Wiring မကောင်းတဲ့အိမ်၊ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ Body Earth ကျနေတဲ့အိမ်ဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ အလွန်အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေဆိုးတစ်ကောင်ကို မွေးမြူထားတာနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ သတိထားမိ စေချင်တယ်.. အဲဒီမြွေဆိုးက အချိန်မရွေး ထပေါက်နိုင်သလို အခန့်မသင့်ရင် အဲဒီမြွေဆိုးထပေါက်သလိုပဲ အချိန်မရွေး ဓာတ်လိုက် သေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိပြီး မိမိအိမ်တွင်းဝါယာတွေ ထပ်ဆင့် သွယ်တန်းမှု တွေမှာ အဆင့်မီတဲ့ ဓာတ်ကြိုးတွေကို အသုံးပြုပြီး ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ အိမ်တွင်းဝါယာအဟောင်း တွေကို လဲလှယ်ပြီး အချိန်မရွေး ကျရောက်လာနိုင်တဲ့ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်က ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့… ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ကွာ..” (Error4ဆိုတာ အမှန်က ဓာတ်လိုက်မှု အန္တရာယ်၊ ဝါယာရှော့(ခ်) ဖြစ်ပြီး အိမ်မီးလောင်မှု အန္တရာယ်က ကာကွယ်ပေးမယ့် အချက်ပြမှုဆိုတာ မီးသုံးစွဲသူတိုင်း သိထားသင့်တယ်..)
လှအောင် “ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်…သူငယ်ချင်းရယ်… မင်းရှင်းပြတဲ့4မီတာစနစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ Error တွေရဲ့အကြောင်း နားထောင်လိုက်ရတာ… အသက်ကယ်ဆေးတစ်လုံးကို သောက်လိုက်ရသလို… ဝမ်းသာရပါတယ်… ငါအသက်ကယ်ဆေး သောက်လိုက်ရသလို… ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်… မီးသုံးစွဲသူ ပြည်သူတွေကိုလည်း မင်းရဲ့အသက်ကယ်ဆေး လေးကို သောက်စေချင်ပါတယ်ကွာ… ငါမင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…”
မြဆောင် “ငါလည်း…ငါ့စာလေးကိုဖတ်မိပြီး မီးသုံးစွဲသူ ပြည်သူတွေ အသိတစ်ခု တိုးသွားတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်၀မ်းသာရပါတယ်ကွာ..အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ…”
စာရေးသူ - ထွန်းလင်း (ရွှေဒုံသား)